Gịnị Ka Jizọs Ga-eme n’Ọdịnihu? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Mgbe Jizọs nwụrụ n’afọ 33, a kpọlitere ya n’ọnwụ, ya alaghachi n’eluigwe. Mgbe ọtụtụ afọ gafere, e chiri ya eze n’eluigwe. (Daniel 7:13, 14) Ebe ọ bụ na e chiela Jizọs eze, ọ ga-eme ka udo dịrị n’ụwa n’ọdịnihu, meekwa ka a ghara inwe onye ga-ada ogbenye.—Gụọ Abụ Ọma 72:7, 8, 13.
Ebe ọ bụ na e chiela Jizọs eze, ọ ga-eme ka ihe ọjọọ kwụsị n’ụwa
Mgbe Jizọs ga-achịwa ụwa, ọ ga-arụ ọtụtụ ọrụ ebube. Ọ ga-eji ike Nna ya nyere ya mee ka ụmụ mmadụ zuo okè. N’oge ahụ, ụwa ga-atọ ụmụ mmadụ ụtọ n’ihi na e nweghịzi onye ga na-anwụ anwụ ma ọ bụ na-aka nká.—Gụọ Jọn 5:26-29; 1 Ndị Kọrịnt 15:25, 26.
Gịnị ka Jizọs na-eme ugbu a?
N’oge anyị a, Jizọs na-ahazi ọrụ ikwusa ozi ọma nke ezigbo ndị na-eso ụzọ ya na-arụ n’ụwa niile. Ndị na-eso ụzọ ya na-akụziri ndị mmadụ ihe Baịbụl kwuru banyere Alaeze Chineke. Jizọs kwuru na ya ga na-enyere ndị na-eso ụzọ ya aka n’ọrụ a ha na-arụ ruo mgbe Alaeze Chineke ga-ewepụ ọchịchị ụmụ mmadụ.—Gụọ Matiu 24:14; 28:19, 20.
Jizọs ji ezigbo ọgbakọ Ndị Kraịst na-akụziri ndị mmadụ otú ka mma ha kwesịrị isi na-ebi ndụ. Ọ ga na-enyere ha aka ruo mgbe e bibiri ụwa ọjọọ a, bụ́ mgbe ụwa ga-aghọ paradaịs otú Chineke kwere ná nkwa.—Gụọ 2 Pita 3:7, 13; Mkpughe 7:17.
Ọtụtụ ndị maara Ekpere Onyenwe Anyị. Ma, olee ihe okwu ahụ bụ́ “Ka alaeze gị bịa” pụtara?